ဖူးနုသစ်: ကမ္ဘာကြီး လုံးသလား ပြားသလား
Posted by ZT at 12:36 AM
အားပါးးးရုံးမှာများ ဘလော့ဂ်ရေးနေသလားဟင် ခုနတုန်းကမရှိပေါင်
“ဟေ့ သူငယ်။ မင်းရုပ်တည်နဲ့ လျှောက်ဖောမနေနဲ့။ ကမ္ဘာဆိုတာက အပြားကြီး။ အဲဒီကမ္ဘာကြီးကို ဧရာမ လိပ်ကြီး တစ်ကောင်က ကျောပေါ်မှာ ပိုးထားတာ။” လို့ ထပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးလည်း ငါးခူပြုံး၊ ငါးသလောက်ပြုံး၊ ငါးသလဲထိုးပြုံးမျိုး ပြုံးပြီးတော့ “ငွှားငွှား။ အဲဒီလို ဆိုရင် အဲဒီလိပ် ကြီးက ဘယ်ပေါ်မှာ ရပ်နေသလဲ။” )))))) ဒီစာလေးကိုသဘောကျတယ်။ ငွှားငွှား...တဲ့ရီနည်းအသစ်ရပြီ
စတီဖင်ဟော့ကင်းရဲ့ အဲဒီ အချိန်ရဲ့ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ် စာအုပ်သိပ်ကောင်းတယ်။
ဒီစာအုပ်ဟာ မက်ဒေါနားက လိင်အကြောင်းရေးထက်စာအုပ်ထက် ပိုအရောင်းသွက်တယ်လို့ အဆိုရှိတယ်။ း-)
တစ်ခါက အလုပ်ထဲမှာ design review လုပ်တော့ U.S. က ဆော့ဖ်ဝဲလ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်က protocol layer တွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု independent ဖြစ်အောင်ရေးထားတဲ့ သူရဲ့ဒီဇိုင်းကို ရှင်းပြတယ်။ အဲဒီမှာ “ခင်ဗျားရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေက အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ အသက်ဖြစ်တဲ့ function ရဲ့ နာမည်ကို Turtle လို့ပေးထားတာကို ဘာလို့လဲလို့ စဉ်းစားမရပါဘူး”လို့ လူတစ်ယောက်က ကောက်မေးတယ်…။ ဒီအခါမှာ ဒီဇိုင်းနာက ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ လိပ်တွေတစ်ကောင်ပေါ် တစ်ကောင်ဆင့်ထားတဲ့ ပုံပြင်ပြောပြပြီး ဖြေသွားတယ်။
Aristotle wasastudent of Plato. Alexander the Great wasastudent of Aristotle. As in Buddhism, Aristotle believed that Universe is made up of five elements - fire, earth, air, water and aether. Such idea in Greek was first recorded by Thales (600BCE) which is much more early than Buddha.
Greeks received "the habits of looking at the sky" from Babylonians (3000BC?).
အဲလိုလား အစကထင်တာ ကမာ္ဘကြီးက ပြားသလားလို့။ ဟိဟိ
တော်တဲ့အတွက် ဆိုင်မှာ(ကိုဂုတ်တီ အကိုဆိုင်မှာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ)ကျွေး
15 Aug 09, 14:25
kom: တို့့ပုသကွယ။် ဖတ်လို့တော့ကောငး်သား
ဒါပေမယ့် စတီဖင်ဟော့ကင်းက အဲသည် လိပ်ပုံပြင်ကို ရေးပြအပြီးမှာ ဒီလိုပြောသွားသေးသဗျ။ စကြ၀ဠာကြီးအကြောင်းကို ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ သိသမျှဟာ အဲသည် လိပ်တွေ တကောင်ပေါ်တကောင်ဆင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ အဖွားကြီး သိတာထက် ဘာမှ သိပ်ထူးခြားပြီး ပိုမသိလှဘူးဆိုပဲ။ း-)
Ko Paw -> ဟုတ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တော့ Big Bang, Quantum Physics နဲ့ Relativity ဖတ်ပြီး အတော် ရွာပတ်သွားတယ်။ :D
same with photo vigor,,, can't read :(
Please download Font package here, unzip it and copy to your C:\_WinNT\_Fonts.
I am using Unicode 5.1 fonts right now. Sorry for inconveniences caused. :D